Carada ka dhalatay dilka fanaankii caanka ah ayaa gilgishay qaybo kamid ah waddanka Ethiopia.
ADDIS ABABA, Ethiopia – Telefishinka ku hadla afka Oromada ee Oromia Media Network ayaa wariyey in la xiray Jawar Maxamed oo ah aas-aasaha Tv-gaas iyo siyaasi mucaarad ku ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed.
Sidda ku xusan warbixinta, waxaa sidoo kale xabsi loo taxaabay Bekele Gerba oo wehliyey Jawar. Ciidamadda booliska federaalka ayaanna xiray. Ma cadda meesha lagu hayo iyo sababta dhabta ah ee loo beegsaday.
"Wariyeyaal ka tirsan shabakadda ayaa kamid ah dadka la xiray," ayay raacisay warbixinta oo daaha ka rogtay in xafiiska OMN ee magaala madaxda Addis Ababa ay la wareegeen ciidamadda bileyska.
Warka uu sii daayey telefishinka ayaa lagu sheegay in xariga uu ka dambeeyay markii ilaalada Jawar ay diideen hub ka dhigis ay ku amreen booliska. Ma jiro illo madax-banaan oo xaqiijinaya warkaas.
Xariga siyaasiyiinta ayaa kusoo hagaagaya xilli Itoobiya ay gilgileen mudaaharaadyo ka dhashay dilka fanaan caan ah. Haacaaluu Hundeessaa oo Oromo ah waxaa xalay lagu beegsaday Addis Ababa.
Dibad-baxyadda oo ka dhacay meelo ay caasimadda kamid ah ayaa ahaa kuwa rabshado watay. Internet-ka, korontada iyo isgaarsiinta ayaa la jaray, wallow qaybo kamida dalka dib loosoo celiyo, goor dambe.
Warar ayaa xusaya in ciidanka federaalka iyo kuwa booliska gobolka Oromada ay dhexmartay shaqaaqo kadib isku daygii koowaad ee xariga Jawar iyo Bekele oo fashilmay, balse kolkii dambe la kaxeeyay.
Dhanka kale, isku dhacyo gobolka Oromada ku dhexmaray ciidamada iyo shacab careysan ayaa lagu waramay in ay sababtay dhimashadda todoba ruux. Lama ogga qaabka ay ku geeriyoodeen dadkaas.
Xaaladda Itoobiya ayaa u muuqaneysa mid kasii dareysa, iyaddoo ay isa soo tarayaan baaqyadda ku saabsan in xukuumadda aysan si adag ula tacaalin, talaabadaas oo ah wax looga bartay madaxdii soo martay dalkaas.
Mowqifka ay DF ka qaadatey xiisadda Itoobiya iyo Masar oo la shaaciyey
Afrika 22.03.2020. 09:30
Khayre ayaa todobaadkii horey ugu safray Addis Ababa si uu caddeeyo isbedel ku yimid qaarar ay taageertay dowladda Soomaaliya.
Toogasho oo ka dhex-dhacday xarunta hay’adda tirakoobka Itoobiya
Afrika 06.08.2019. 14:32
Mareykanka oo digniin amni kasoo saarey Itoobiya kadib inqilaab
Afrika 23.06.2019. 07:40
Itoobiya ma waxay Kenya ku garab-siineysaa cadaadiska Soomaaliya?
Afrika 29.05.2019. 10:55